Isitolo esidayisa yonke impahla Medical alahlwayo Face Imaski Factory kanye Umkhiqizi | I-JBH Medical
1. I-FDA, CE Kuvunyelwe
Imaski 2.Disposable yakhiwa lwangaphandle non-nokwelukiweyo indwangu, melt melt Indwangu kushaywa futhi kwangaphakathi okungezona nokwelukiweyo Indwangu impahla, plastic ikhala isiqeshana kanye imaski ibhande
3. Gqoka imaski yethu yokulwa nokungezwani komzimba nothuli emsebenzini noma lapho uphuma ukuze ugcine impilo nokuphepha
4. Kukusiza uphefumule kalula ngokuvikela umgudu wakho wokuphefumula ezintweni ezingcolisa umoya kanye nasemizimbeni, bese uyigcina iyinyumba ngangokunokwenzeka
5. Ngemuva kokugqoka imaski, kufanele ikwazi ukumboza umlomo, ikhala nesilevu salowo oyigqokile
6. I-hook yokunethezeka yendlebe ethambile, ikakhulukazi indlebe ethambile yokuqeda ukucindezela kwendlebe futhi ikunikeze umuzwa wokugqoka ngokunethezeka
Imaskhi yokuhlunga impahla
Isakhiwo semaski ye-gauze sinokunamathela okubi ebusweni bomuntu. Izinhlayiya eziningi ezincane ezilimaza kakhulu kithi zizongena emgudwini wokuphefumula ziye emaphashini ngokusebenzisa igebe phakathi komaskhi nobuso. Izinto zokuhlunga ngokuvamile ziyindwangu eyenziwe ngomshini. Ukuphela kwendlela yokufeza ukusebenza kahle kokuvimba uthuli ukukhulisa ukushuba, futhi umphumela ongemuhle wokukhulisa ukushuba ukwenza umsebenzisi azizwe ukuthi ukumelana nokuphefumula kukhulu futhi kungakhululekile. Indwangu engalukwanga ngogesi ayikwazi ukuvimba izinhlayiya ezinkulu zothuli kuphela, kepha futhi nenkokhelo kagesi enamathiselwe ebusweni bayo ingamunca uthuli oluhle ngokuheha kwe-electrostatic, ifinyelele ukusebenza kahle kokuvimba uthuli. Ubukhulu bento yokuhlunga buncane kakhulu, okunciphisa kakhulu ukumelana nokuphefumula komsebenzisi futhi kuzizwe kunethezekile, ngaleyo ndlela kufezekiswe izimo ezintathu ezidingekayo zokuhlunga okuhle esikushilo ekuqaleni. Ngesihlungi esihle kanye nesakhiwo semaski esakhiwe ngokwesayensi, kwakheka imaskhi esebenza kahle futhi esezingeni eliphakeme.
Umklamo wokuvuza we-anti-side wokuvikela imaskhi ukuvimba umoya ukuthi ungadluleli phakathi kwe-mask phakathi kobuso bomuntu ngaphandle kokubanjwa ngocingo. Umoya ufana nokugeleza kwamanzi, lapho ukumelana okuncane khona, kugeleza kuqala. Lapho ukuma kwesifihla-buso kungasondele ebusweni bomuntu, izinto eziyingozi ezisemoyeni zizongena zisuke ekucingeni bese zingena emgudwini wokuphefumula womuntu. Ngakho-ke, noma ngabe ukhetha imaski enezinto zokuhlunga ezihamba phambili. Futhi ayikwazi ukuvikela impilo yakho. Imithethonqubo namazinga amaningi angaphandle abeka ukuthi abasebenzi kufanele bavivinye njalo ukuqina kwamaski. Inhloso wukuqinisekisa ukuthi abasebenzi bakhetha amaski osayizi abafanele futhi bagqoke izifihla-buso ezinyathelweni ezifanele.
Ngale ndlela, abasebenzi bazozimisela ukugcizelela ukuthi bazigqoke emsebenzini futhi zithuthukise ukusebenza kwazo ngempumelelo. Amaski angenasondlo emazweni angaphandle awadingi ukuhlanzwa noma ukushintshwa. Lapho umgoqo wothuli ugcwele noma imaski ilimele, izolahlwa. Lokhu akuqinisekisi kuphela ukuhlanzeka kwesifihla-buso, kepha futhi kusindisa abasebenzi isikhathi namandla okugcina imaski. Ngaphezu kwalokho, amaski amaningi amukela ukwakheka kwe-arched, okungeke kuqinisekise kuphela ukulingana okuhle nobuso bobuso, kepha futhi kugcina isikhala esithile emlonyeni nasekhaleni, okunethezeka ukugqoka.
Olandelayo: Ukudluliswa kwesiguli okuphathekayo okusongekayo Phakamisa ukuphakamisa kwabakhubazekile
izihlangu zobuso ezilahlwayo
buso abalahlwayo, umbhede oguquguqukayo weziguli, ophakamisa isiguli ngogesi, embhedeni medical adjustable, ophakamisa isiguli wokubacindezela, imaski yobuso bezokwelapha,
umbhede oguquguqukayo weziguli, buso abalahlwayo, ophakamisa isiguli wokubacindezela, ophakamisa isiguli ngogesi, imaski yobuso bezokwelapha, embhedeni medical adjustable,